optical fiber ကိုကြွေလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် - တရုတ် Dongguan Glorystar လေဆာ
အဓိကအားဖြင့်တိကျစွာဖြတ်တောက်ခြင်း, လူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်အဘို့အလိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်လာကြတယ်, လူမီနီယံ nitride, zirconia ကြွေထည်အတှကျအသုံးပွု; လည်းအချို့သောပါးလွှာသတ္တုစာရွက်များ၏တိကျဖြတ်တောက်ခြင်းသည်။ ကောင်းသောတင်သွင်းဖိုင်ဘာလေဆာအရင်းအမြစ်ချမှတ်ချောမွေ့ပြေးနှင့်ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူ·စက်အိပ်ရာအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကို အသုံးပြု. တည်ဆောက်ပုံ, မြင့်မားသောတိ, ကောင်းသောငလျင်ခုခံ·အထူးခက်ခဲများနှင့်ပျက်စီးလွယ်သောပစ္စည်းများများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုအုပ်စိုးသောမင်းဆန်ခါထိပ်တန်းတိကျစွာတပ်ဆင်ထားအပြည့်အဝပူးတွဲတင်သွင်း linear မော်တာပလက်ဖောင်း, ·, အစက်အပြောက် mode ကိုတစ်ဦး ...
အဓိကအားဖြင့်တိကျစွာဖြတ်တောက်ခြင်း, လူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်အဘို့အလိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်လာကြတယ်, လူမီနီယံ nitride, zirconia ကြွေထည်အတှကျအသုံးပွု; လည်းအချို့သောပါးလွှာသတ္တုစာရွက်များ၏တိကျဖြတ်တောက်ခြင်းသည်။
·စက်အိပ်ရာအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကို အသုံးပြု. တည်ဆောက်ပုံ, မြင့်မားသောတိ, ကောင်းသောငလျင်ခုခံ
·အပြည့်အဝချောမွေ့ပြေးနှင့်ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူအထူးခက်ခဲများနှင့်ပျက်စီးလွယ်သောပစ္စည်းများများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုအုပ်စိုးသောမင်းဆန်ခါထိပ်တန်းတိကျစွာတပ်ဆင် linear မော်တာပလက်ဖောင်း, တင်သွင်းပူးတွဲ
·ချမှတ်တင်သွင်းဖိုင်ဘာလေဆာအရင်းအမြစ်, ကောင်းသောအစက်အပြောက် mode ကိုနှင့်မြင့်မားသောဖြတ်တောက်ခြင်းထိရောက်မှု
·ကိုယ်ပိုင်တီထွင် software ကိုပုံဆွဲခြင်းနှင့် file ကိုမိတ်ဆက်, CCD အော်တို positioning ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့စီးဆင်းမှု optimization နှင့်အော်ပရေတာများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိပညာမလိုအပ်မြင့်မားတဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်သုံးစွဲဖို့လုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူပြီးလွယ်ကူသည်
·လွယ်ကူပုံဆွဲဘို့ကိုင်တွယ်ရန်: သင်တိုက်ရိုက်စံ DXF ဖိုင်တွေတင်သွင်းနိုင်သည်
လေဆာအရင်းအမြစ် (200-1000W ရွေးချယ်နိုင်)
XY ဝင်ရိုး max ကို။ လေဖြတ်ခြင်း 500mm x ကို 450mm
ထပ်ခါတလဲလဲနေရာချထားတိကျမှန်ကန်မှု ± 1um
အထူဖြတ်တောက်ခြင်း ≤2mm (ပစ္စည်းများအပေါ် depands))
ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်း ≥10mm / s ကို (ပစ္စည်းများအပေါ် depands))
width ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း ≤0.1mm (ပစ္စည်းများအပေါ် depands))
တိကျမှန်ကန်မှုကိုဖြတ်တောက်ဖျောပွပါ ± 0.02mm (ပစ္စည်းများအပေါ် depands))
XY ဝင်ရိုးစားပွဲပေါ်မှာအလုပ်လုပ်မြန်နှုန်း 30 / မိနစ်
Power ကလိုအပ်ချက် 3Phase, 380V / 50HZ / 5KW
ယခင်: လက်ဗွေ module များအတွက်ခရမ်းလွန်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်